Hole In One ပထမအကြိမ် Hole In One ဒုတိယအကြိမ် Hole In One တတိယအကြိမ် Hole In One ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း – ၀၉-၃၀၉၉၈၃၃၄ ၀၉-၃၀၉၉၈၃၃၅
admin / Beverages /
ဆက်သွယ်ရန်…. ဖုန်း ၀၁-၆၅၁၁၇၇ ၀၁-၆၅၂၁၆၉ ၀၁-၆၅၆၈၄၅ ၀၁-၆၈၆၈၄၆
Products & Capacities Tyre (Big Size) 10 Nos & (Small Size) 8 Nos in 8 hr One Shift 360 Nos/month, 3,960 Nos/yr, (18 Nos/day x 20days/months x 11months), 12.00×20, 11.00×20, 10R22.5, 10.00×20, 9.00×20, 7.50×16, 7.00×16, 7.50×15, 7.00×15, 6.50×16, 215/75R16, 195/85R16, 185/85R16, 205/70R14, 185/70R14 Contact Number 01-646940 , 01-646941 ဆက်သွယ်ဝယ်ယူလိုပါက>>>Shwe Pyi Myint Mo Co.,Ltd…….Ph-0931392999Myanmar Mahar […]
admin / Terminal Port /
Trade And Commerce Enterprise
admin / hello /
Innwa Bank Limited Signed the MOU and Purchase Contracts Myanmar Telecommunication and Technology Services ( MTS) and Mobilemat Company Limited on 15.1.2013 For the affairs of Myanmar Economic Corporation in accordance with the Legitimay of Central Bank of Myanmar. www.myanmarmobilemoney.com call center 1212, 1211 Contact Number : 01-391136 , 01-375893
admin / Telecommunication /
In the first year of project, total of 438,000 GSM Lines by 126 Sites are planned and allocating in Ayeyarwadi Division according to Three Phase ( Phase (I) 50 Sites, Phase (II) 35 Sites, and Phase (III) 41 Sites).In 2011, as to participate and supply the Ministry of Post and Telecommunication in the mission of […]
MEC Tel CDMA 800MHz ၏ ၀န်ေ်ဆာင်မှုရွှေမေတ္တာအစီအစဉ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့် (၇)မြို့နယ် ဖြစ်သည့် ဟားခါးမြို့နယ်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ဟသာင်္တ မြို့နယ်၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်နှင့်ဇလွန်မြို့နယ်များ အား ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပြည်သူများကအစားအသောက်များ၊ ဆေးဝါးများ၊ လှူဒါန်း မှုများ ရှိနေပေမယ့်လည်း နည်းပညာကူညီမှုပြုလုပ်ခြင်း ကိုမရှိသေးပဲ လက်ရှိအချိန်မှာသာ ပြည်တွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် MECTel CDMA 800MHz မှ ပထမဦး ဆုံး အကြိမ်အခမဲ့ ဖုန်းခေါ် ဆိုမှုအား ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ၄င်းဒေသရှိ ပြည်သူများ၊ စေတနာရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများနှင့် လူမှုရေးပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများမှ အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အပြင် ဖုန်းခကုန်၍ဆက်သွယ် မှုပြတ်တောက်သွားခြင်း၊ ငွေဖြည့်ရခြင်းများမရှိသည့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် မိဘပြည်သူများ အတွက် စီစဉ်ပေးလိုက်ပါသည်။ […]
Since year 2000, Remote Sensing Ground Station has been established and producing satellite digited photographs and maps for the national purpose.